Kunzima ukuthola umuntu akathandi pizza. Sekuyisikhathi eside uzilungiselele, futhi isizwe ngasinye has izici zayo siqu kanye inhlama laso for pizza toppings. Kuphakathi kukhetha okumnandi ngendlela yalo futhi ine iphunga enkulu. Ukwehlukahluka kwezimangaliso ezahlukene pizza zokupheka wonke umuntu angakhetha ezithakazelisa kakhulu, okuzokwenza ukuhlangabezana ukuthambekela yayo Culinary.
Cabangela ezimbalwa ongakhetha kadokotela "Ukugcwalisa Pizza":
· Ukugcwalisa pizza ne imifino: eyodwa isibani, utamatisi ezimbili, amakhowe engamakhulu amagremu, amahlanu amagremu leminqumo noshizi kanzima, oregano, basil, 4 wezipuni isoso kanye imayonnaise. Unikezele ngezinsizakalo inhlama ezigcotshwe isoso kanye imayonnaise. It ngisho nokubekwa oqoshiwe imifino kanye amakhowe, ufafaze ushizi vukuza.
· Ukugcwalisa pizza ne amalikhi nebasili: amagremu ezingamakhulu amabili ushizi, kweqembu amalikhi, utamatisi ezimbili, fresh amahlamvu basil futhi oregano. Nge utamatisi scalded udinga ukususa ikhasi ke nquma kubo. On the utamatisi olungiselelwe inhlama ungqimba lamapulangwe oqoshiwe zibe ezinkulu nezixhobo amalikhi, amakhambi fresh and izingcezu ezincane mozzarella.
· Ukugcwalisa pizza ne amakhowe futhi imbuzi ushizi: 150 amagremu imbuzi ushizi kanye Fontina, kancane kuka-100 amagremu yanoma yimuphi mushroom, ingcosana imbewu cumin, onion. Fry amakhowe anyanisi oqoshiwe futhi ukusabalala ku inhlama ukulungele. Fafaza imbewu caraway kanye tincetu ushizi.
· Ukwanelisa kadokotela "ze-pizza ne pesto sauce": isigamu ingilazi sauce siphelile, utamatisi, pepper elimnandi, amahlanu amagremu leminqumo noma iminqumo, onion isigamu, eziyikhulu amagremu artichokes okusemathinini, ngayikhulu namashumi ayisihlanu amagremu imbuzi ushizi noma feta. Smear ungqimba inhlama sauce ukusabalala phezu ochotshoziwe artichokes, iminqumo, upelepele notamatisi. Fafaza tincetu ushizi.
· Tasty ukugcwaliswa pizza is etholakala imfanzi isipinashi. Ngoba iyadingeka ukuze 150 amagremu izimfanzi futhi isipinashi eqandisiwe, wezipuni ezimbalwa sauce pestle usulungile, mayelana 150 g kwanoma iyiphi ushizi. I walungisa inhlama ungqimba Athambisa usoso, ukubeka imfanzi isipinashi imibengo ke ufafaze ushizi vukuza.
· Toppings Pizza izinhlanzi obomvu: amagremu ezingamakhulu amabili iyiphi ushizi ukhilimu, ukhilimu omuncu, amagremu ayikhulu namashumi amabili, amagremu ezingamakhulu amabili izinhlanzi obomvu, isigamu utamatisi, ezintathu wezipuni Capers nemifino oqoshiwe. Hlanganisa amakhambi, ukhilimu omuncu noshizi ke zisakazwa inhlama. Bhaka amaminithi angu-7. Sithola okuphuma kuhhavini bese zisakazwa pizza tincetu salmon, Capers futhi utamatisi oqotshiwe. Khonza etafuleni.
· Ukugcwalisa pizza ne-blue cheese kanye amagonandoda: yikhulu amagremu mozzarella, a amagremu ayikhulu blue ushizi (Roquefort noma Dorblu), omunye ipheya, amahlanu amagremu walnuts anamanci mahlanu amagremu oqoshiwe onion eluhlaza. Sokuhlola ukusabalala ungqimba oqoshiwe ushizi tincetu ke ungqimba amapulasitiki amagonandoda, balandela nati oqoshiwe futhi crumbled ushizi oluhlaza okwesibhakabhaka. pizza Ready ezenziwe afafaze ne anyanisi oluhlaza.
· Ukugcwalisa pizza ne anyanisi, Gorgonzola kanye apula. Sika njengoba nomzimba omncane ngangokunokwenzeka nge onion olulodwa bomvu-apula eliluhlaza okotshani. Shisisa pan kwenye isipuni amafutha omnqumo ethosiwe imizuzu onion 10, bese ufaka uviniga balsamic futhi ukulungiselela ukuhwamuka wako. On inhlama okulungiselelwe ukusakaza anyanisi nekharameli, apula, walnuts oqoshiwe ufafaze Gorgonzola. Bhaka kuze brown golden.
Waphenduka wabheka la cuisine kazwelonke, ungathola ezihlukahlukene engavamile pizza zokupheka. Kuyoba ezithakazelisayo ukuze cuisine Isi-Armenia nesiGeorgia abathandi inyama nopelepele. Indlela ukupheka ukugxusha pizza ngesitayela kwabo? Kulula: eziningi amakhambi fresh, garlic, ezinhle yemvu yenkomo, bell pepper, utamatisi okusemathinini futhi imbuzi ushizi. Sabalalisa zonke izithako Armenia lavash, amakhekhe bese pizza adumile "Lohmadzhun", okuyinto uzongithanda.
Ikhekhe imiqulu kanye sushi (isithombe esihlokweni)
Amathiphu besifazane indlela ukupheka zucchini e multivarka
Oatmeal e multivarka: zokupheka elula
Isiqedaphunga Safe. Brand kanye nokwakheka deodorants
Indlela ukuphrinta kukhompyutha yakho. ukuthayipha How fast kukhompyutha
Kungani "ukuxhumana" akusho ukulayisha isithombe?
Kuyini ubuchwepheshe? Concept, izibonelo, isicelo
Indlela Tie uthayi emincane. izinhlobo ISIZINDA
Okufanele ukwenze uma ulahlekile ulimi ibha?
Ekukhunjulwa sokubuyiselwa ngu Zhdanov. ukuvuselelwa Zemvelo